श्रीमानले हेर्दा हेर्दै ८ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीले रातिको २ बजे नदीमा गएर……. (भिडियो) – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/श्रीमानले हेर्दा हेर्दै ८ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीले रातिको २ बजे नदीमा गएर……. (भिडियो)
श्रीमानले हेर्दा हेर्दै ८ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीले रातिको २ बजे नदीमा गएर……. (भिडियो)
काठमाडौ । डाक्टरले केही दिनमै सुत्केरी हुने समय दिएका थिए । तर श्रीमानले हेर्दा हेर्दै ति महिलाले राप्ती नदिमा हा ‘म फा ‘लि’न् । रातीको २ वजे उनले यस्तो गरेकी हुन् । श्रीमतीले त्यस्तो घटना गरेर मृत्यु भएपछि उनका श्रीमानको अहिले वेहाल भएको छ । यो घटना बाँके जिल्लाको हो । विवाह गरेको २ वर्ष पछि दिपा चौधरी सन्तानलाई जन्म दिने समय दिन नजिक आइरहेको थियो ।
विहानभरी उनीहरुले संगै काम गरेका थिए । विहान खाना पनि संगै खाए । त्यसपछि श्रीमान हलो जोत्न गएका थिए । सांझ घर फर्किए । त्यती बेला पनि राम्रै चलेको थियो । राती घरमा साथीहरु भेट्न आए । केही बेर कुराकानी गरेपछि एक जना साथीले धेरै राती भयो तिमी मलाई छोड्न हिँड भने । उनले साथीलाई छोड्न गए ।
करिब ९ वजे घरवाट साथीलाई छोड्न गएका उनलाई श्रीमतीले फोन गरेर म घरवाट निस्किए । घरमा साँचो लगाएको छ तिमी साँचो फो रेर बस भनिन् । तर श्रीमानले उनको कुरा विश्वास गरेनन् । तर घर फर्कदा श्रीमती घरमा थिइनन् कोठामा साँचो लगाएको थियो । आएर भाउजुलाई सोध्दा उनले मलाई थाहा छैन भनिन् ।
उनले मध्यरातमा श्रीमतीलाई खोजे । फेला पारेनन् । फोन गर्दा म राप्ती नदीको पुलको बीचमा छु भनिन् । उनी खोज्न गए । उनले आफ्नो दाईको छोरालाई लिएर खोज्न गए । श्रीमान र छोराले हेर्दा हेर्दै उनले राप्ती नदीमा पुलवाट हा ‘म फा ‘लि’न् । मध्यरात २ वजे राप्ती पुलमा श्रीमतीसंग अर्को पुरुष पनि थिए ।
यो पनि, अवरुद्ध विद्युत्सेवा टालटुल गर्दै सञ्चालन हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसहित आसपासका क्षेत्र डेढमहिनादेखि अन्धकारमय बनेको छ । सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपाालिकालाई सेवा दिँदै आएको हिल्दुम वितरण केन्द्र र यहाँको उपभोक्ता समितिको लापरबाहीले सदरमुकाम सिमकोटसहित दुई गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
गत भदौ अन्तिम महिनादेखि अवरुद्ध बनेको विद्युत् समयमै मर्मत नहुँदा त्यहाँका दुई हजार ३००भन्दा बढी सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको हो । पावर हाउस नजिकै रहेको ओभरफ्लो तथा विद्युत् गृहको फर्बेमा बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएकाले विद्युत् सेवा झण्डै दुई महिनादेखि बन्द छ ।
विद्युत् गृहको फर्बेमा केही मात्रामा मर्मत गरिए पनि पहिराले ढाकेको भाग पूरै मर्मत हुन सकेको छैन । पहिराले ढाकेको भाग मर्मत गर्न अझै समय लाग्ने भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेल्दुम वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूरै भाग मर्मतका लागि बजेट र सामग्रीको अभाव छ, अहिले केही मात्रामा मर्मत गरेर अस्थायी रुपमा विद्युत् सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।”
पहिराले ढाकेकोे क्यानलसहित अन्य भाग मर्मत गर्न धेरै खर्च लाग्नाका साथै मर्मतमा बढी समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । पहिराले क्षति पु¥याएको फर्बेमा झण्डै ३६५ थान ग्याबिन आवश्यक पर्ने देखिएको प्रमुख ऐडीले बताउनुभयो । मर्मतका नाममा हेल्दुम वितरण केन्द्रको आयोजनाले बर्सेनि करोडभन्दा बढी खर्च गरिसके पनि दिगो बनाउन नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परिरहेको हो ।
यस पटकको मर्मतका लागि रू २५ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको । एक पटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा रू २० लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको छ । वैशाखयतादेखि दुई पटक मर्मत भइसकेको छ । आयोजनाको सामग्री पुरानो भएका कारण पटक–पटक मर्मत गर्नुपरेको हो । आयोजनाको विभिन्न स्थानमा रहेका क्यालन चुहिने अवस्थामा छ । मर्मतको नाममा बजेट खर्च भए पनि क्यानल चुुहिने भएका हुन् । विद्युत् गृहको फर्वेमा अहिले प्लास्टिकका पोलिथिङ पाइप जडान गरिएकाले हिउँदमा बरफ जम्ने र फुटेर विद्युत बन्द हुने सम्भाबनाले फेरि सेवाग्राही अन्धकारमा बस्दै आउनुपर्ने देखिएको छ ।
युएईलाई कामदार आवश्यक परेपछि ल्यायो यस्तो भिसा नियम, अब सहजै हुनेछ युएई रोजगार !